Lavatory Sink Faucets Na Chrome emeputa - Viga Faucet emeputa
Home Kachasị Fakpọsa Ahụ roomlọ Bathlọ Bathlọ Mara Mma Lavatory Sink Faucets Na Chrome emeputa
Dị ka ọkachamara Lavatory Sink Fosets Mmepụta, anyị nwere ọtụtụ ụzọ anyị ga-esi họrọ, ngwaahịa a bụ naanị maka igosipụta, ọ bụrụ na ịchọrọ karịa ozi ngwaahịa ụlọ ịsa ahụ, biko pịa Faucet ime ụlọ ịwụ,Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ịchọrọ sampleti ma ọ bụ katalọgụ ngwaahịa na nkọwapụta, biko kpọtụrụ anyị .
Factroy n'ùkwù mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri agbakwunyere akwa ụlọ ịsa ahụ na Chrome 7611A0LWC
VIGA bụ ọkachamara na n'ichepụta ụlọ ịwụ ahụ fosets, kichin faucets na ime ụlọ ịwụ ngwa, foset na ngwa ụfọdụ nwere ike ahaziri gị aghụghọ ma ọ bụ logo. Ebufewo ngwaahịa ndị VIGA na ọtụtụ mba ndị ọzọ dịka USA, CANADA, ITALY, wdg. Nkebi # 761100A0LWC bụ otu n'ime ngwaahịa kpakpando VIGA. Ejiri H59% ọla bras mebere pọpụl ịsa ahụ, ọ na-eme ka mgbatị ndị ọzọ na-elekọta ahụ ike na ụzọ ala.
761100LWC bụ ihe ama ama nke ukwuu n'etiti ahịa Europe na north America. Ngwa chrome zuru oke na-enye ikike siri ike nke mgbochi-agba, a ga-enye gị ụdị agba dị iche iche.
Tags:ime ụlọ ịwụ lavabo mmepụta ndị na-emepụta ihe
Mbụ: VIGA na-ere ụlọ decket n’elu ụlọ ịsa ahụ na-acha uhie uhie na chrome emechara 251100CH
Next: Ime ụlọ ịsa ahụ na China Faucet